ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းတွေ ဖြေရတာစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် Quest to Million ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရင်းနဲ့ ကိုယ်ကအမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားရင် MRTV Entertainment Quest to Millionအစီအစဉ်ရဲ့ TV Show မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမှာပါ။ iPhone XS Max နဲ့ တခြား စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ဆုကြေးငွေတွေ ရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးလဲရှိတယ်နော်။ TV Show ကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိသွားသူတွေကတော့ ငွေကျပ် တစ်သန်းချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးရရှိမှာပါ။
တစ်ရက်/ ၉၉ ကျပ်
“Quest to Million” service မေးလေ့ မေးထရှိသည့် မေးခွန်းများ
1. “Quest to Million” service ဆိုတာဘာလဲ?
- Quest to Million Service ဆိုတာ MPTအသုံးပြုသူတွေသာ ခံစားခွင့်ရှိသော လူတွေရဲ့ ဗဟုသုတ နဲ့အကြောင်းအရာ တွေကို မြှင့်တင်ပေးသောအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
- ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူများမှ မေးခွန်းများဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး လစဉ်အမှတ်အများဆုံးအယောက် ၁၀၀အား ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအယောက် ၁၀၀ သည် MRTV entertainmentအစီအစဉ်တွင် ကျင်းပသော Quest to Million ပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ (အမှတ်ပေး စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား မေးခွန်း နံပါတ်7တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)
2. “Quest to Million” service ကိုအသုံးပြုလိုပါက ဘယ်လိုရယူရပါမလဲ။
- ဝန်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုလိုပါက 8576 သို့ ON ဟုပေးပို့ပြီး ရယူနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) http://questtomio.com/ မှ တစ်ဆင့် ဝင်ရောက် ၍ register ပြုလုပ် ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
3. “Quest to Million” service ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခမှာ ဘယ်လောက်ပါလဲ။
- Quest to Million ကိုအသိပညာဗဟုသုတ တိုးပွားစေရန် နေ့စဉ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအသုံးပြုသူအနေနဲ့ တစ်ရက်ကို ၉၉ ကျပ် (အခွန် ၅% ပါဝင်ပြီး) ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Quest ၁ ခုကို မေးခွန်း ၅ ခုဖြင့်အသင်းဝင်များမှ ရရှိဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
- တစ်ရက်လျှင် မေးခွန်း ၅ ခုဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူအနေနဲ့ ထပ်မံ၍ မေးခွန်းများကို ထပ်မံဖြေဆို လို လျှင် တစ်ကြိမ်ကို ၉၉ ကျပ်ဖြင့် ထပ်မံဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။
4. “Quest to Million” service ကို ဘယ်လိုဆော့ရမလဲ?
a.အဖွဲ့ဝင်ကြေးထည့်သွင်းအောင်မြင်ပြီးနောက် Quest တစ်ခုကို မေးခွန်း (5) ခုနှင့် ရရှိပါမည်။ ပထမဦးဆုံး မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် SMS မှတစ်ဆင့် password နှင့် portal URL လင့်လ်ကို ရရှိပါမည်။
b. ကစားသူသည် Portal ထဲသို့ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးအမှတ်များနှင့်အဆင့်များတိုးပွားရန် Quest များကိုဖြေဆိုပြီး ယခင်လမှအဆင့်ရလဒ်များကိုလည်း စစ်ဆေးကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
c. ကစားသူသည် မိမိတို့၏ ID နှင့် Nick Name များကို User Info စာမျက်နှာရှိ Menu ထဲတွင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
d. ကစားသူသည်အပို Quest တစ်ခုကို မေးခွန်း (5)ခုနှင့်အတူတူ တစ်ကြိမ်လျှင် 99MMK (အခွန်ဆောင်ပြီး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ကစားသူသည် တစ်နေ့လျှင်အများဆုံး 229 ကြိမ်သာအပိုဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
e. ရမှတ်များကို ရက်(၃၀)အတွင်း Question Page တွင် စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။ ကစားသူသည် မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရန်အချိန်အတွင်း မည်သည့်နေ့မဆိုဝင်ရောက်ဖြေဆို နိုင်ပြီး နေ့တိုင်း မိမိအကောင့်ကို ဝင်ရောက်မလိုအပ်ပါ။
5. လစဉ် မည်သည့်အချိန်တွင်အမှတ်အများဆုံးအယောက် ၁၀၀အားမည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။
- လတစ်လ၏ နောက်ဆုံးနေ့ 23:59:59အချိန်တွင်အမှတ်အများဆုံးအယောက် ၁၀၀အား ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
- နောက်တစ်လ ၏ ၁ ရက်နေ့မှ စပြီး အမှတ်များကို စတင်ပြန်လည်ရေတွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ (အရှေ့ လ ကအမှတ်များကို ဖြတ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။)
6.အကယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူဟာ တစ်လအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုပြီးနောက်ရက်များအကြာတွင် ဝန်ဆောင်မှုအား ပယ်ဖျက်မည်။ ထို့နောက် ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ဝန်ဆောင်မှုအား ပြန်လည်ရယူပါကအမှတ်များ ပေါင်းသွားပါမည်လား။
- လ တစ်လအတွင်း ဖြစ်ပါကအမှတ်များအားပြန်လည်ပေါင်းပေးသွားပါမည်။
7. ရမှတ်များကို မည်သို့သက်မှတ်မည်နည်း?
နေ့စဉ်အဖွဲ့ဝင်ကြေးထည့်သွင်းအောင်မြင်ပြီးနောက် မေးခွန်း ၅ခု နဲ့ Content တစ်ခုရရှိပါမည်။အသုံးပြုသူသည်အမှတ် (၁၀)မှတ်ကိုအလိုအလျောက်ရရှိပါမည်။ ကစားသူသည် မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုချိန်မှစ၍အမှတ်(10)ရရှိပါမည်။ ရမှတ်များကိုအောက်ပါစည်းမျဉ်းအတိုင်းတွက်ချက်နိုင်ပါသည်။
မေးခွန်းဖြေဆိုခြင်း ရမှတ်များ မှတ်ချက်
မေးခွန်း 1 ခုမှန်ကန်လျှင် 1*2=2 2မှတ်/အဖြေမှန်
မေးခွန်း2ခုမှန်ကန်လျှင် 2*2=4 2မှတ်/အဖြေမှန်
မေးခွန်း3ခုမှန်ကန်လျှင် 3*2=6 2မှတ်/အဖြေမှန်
မေးခွန်း4ခုမှန်ကန်လျှင် 4*3=12 3မှတ်/အဖြေမှန် (အပိုဆု)
မေးခွန်း5ခုမှန်ကန်လျှင် 5*4=20 4မှတ်/အဖြေမှန် (အပိုဆု)
a) ပထမစနစ်သည် ရမှတ်အမြင့်ဆုံးမှအနိမ့်ဆုံးသို့ သွားတော့အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအမှတ်များသူသည်အဆင့်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
9.အနိုင်ရရှိသူ ပထမ ၁၀၀ဦးသည် MRTV Entertainment ရှိ TV program ကို မည်သို့ ဆက်သွယ်ရမည်နည်း?
အချိန်များကို ဖြတ်ပြီးပါက ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
a) ပထမဦးဆုံးအနိုင်ရရှိသူ (100)ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook မှတဆင့် စာရင်းထုတ်ပြန်ပြီးအနိုင်ရရှိသူမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ခံသို့ မက်ဆေ့လ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
b) ဝန်ဆောင်မှုအားထောက်ပံ့ပေးသူသည်လည်း Call Center မှ တစ်ဆင့် ပထမအနိုင်ရရှိသူ (100)အား ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးအစီအစဉ်အား ဝင်ရောက်ပါဝင်မည် ဟုတ် မဟုတ်ကို တစ်ဦးချင်းစီအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါမည်။
c) လူဦးရေအတိအကျ စာရင်းရပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့မှ MRTV Entertainment သို့ စာရင်း များကို ပေးအပ်ပြီး ၎င်းတို့မှနောက်ဆက်လက်မည့်အဆင့်များကို ယခင်ပြုလုပ်နေကြအတိုင်းစီစဉ်သွားပါမည်။
10. ဆုများကို မည်သို့ရရှိမည်နည်း?
- Mobifun မှ ကံထူးရှင်များကို Iphone Xs Max , OPPO F7,အားသွင်းဘထ္ကရီ, ငွေဖြည့်ကဒ်များနှင့်အစရှိသည်တို့ကို ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- ကစားသူများသည် Quest To Million ဝန်ဆောင်မှုကို ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ရမည်။
- လစဉ် ဆုကြေးများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Item Detail Prize
Top 1 OPPO F7 Youth
Top4ငွေဖြည့်ကတ်ဒ် (၁၀,၀၀၀)ကျပ်
Top5ငွေဖြည့်ကတ်ဒ် (၁၀,၀၀၀)ကျပ်
Top6ငွေဖြည့်ကတ်ဒ် (၁၀,၀၀၀)ကျပ်
Top7ငွေဖြည့်ကတ်ဒ် (၅,၀၀၀)ကျပ်
Top 8 ငွေဖြည့်ကတ်ဒ် (၅,၀၀၀)ကျပ်
Top9ငွေဖြည့်ကတ်ဒ် (၃,၀၀၀)ကျပ်
Top 10 ငွေဖြည့်ကတ်ဒ် (၃,၀၀၀)ကျပ်
- ကစားသူ၏ ရမှတ်အဆင့်သည် လစဉ် Top 10 စာရင်းတွင် ၆လအတွင်း ၅ကြိမ်ပါဝင်ပါက iPhone XS Max ကို ကံထူးနိုင်ရန်အခွင့်အရေးရရှိပါမည်။
11. ဝန်ဆောင်မှုအား ရပ်တန့်လိုပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမလဲ။
- ဝန်ဆောင်မှုအား ရပ်တန့်လိုလျှင် OFF ဟုနှိပ်၍ 8576 သို့ပေးပို့ပါ၊ (သို့မဟုတ်) http://questtomio.com ကိုဝင်၍ Menu ကိုရှာ၍ unregister လုပ်နိုင်ပါသည်။
- ကျွန်ုပ်တို့၏ Website မှ သင်မေးလိုသောမေးခွန်းများကို ရှာဖွေမတွေ့နိုင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Call center သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
- ခေါ်ဆိုရန်ဖုန်နံပါတ်များ- ၀၉၄၀၄၀၆၈၈၈၁/ ၀၉၄၀၄၀၆၈၈၈၂/ ၁၀၆
FAQs of “Quest to Million” Service
- Quest to Million Service isaplatform to improve people’s knowledge, and exclusive for MPT Subscribers only.
- MPT subscribers have to answer the question and 100 subscribers who achieve the maximum scores monthly will be selected. Those 100 subscribers will getachance to compete in Quest to Million contest by MRTV Entertainment program.
(The game rules can be checked in question number 7)
2. How to access Quest to Million service?
- Subscribers who want to subscribe Quest to Million service can send ON to 8576 (or) accessed through URL: http://questtomio.com address via mobile devices.
3. How much is the charge for subscription Quest to Million Service?
- Users will be charged 99Ks/daily (including 5% tax). Subscribers can answer5questions per quest. Quest to Million isadaily subscription service that allows users the flexibility to play Quest and get related knowledge.
- Subscribers have to answer5questions inaday. Subscribers can get more quest with 99Ks/time.
4. How to play Quest to Million Mobile Service?
a) After subscription and success charging will get 1 quest with5questions. And password and portal URL will be delivered by SMS after first register.
b) Customers can login the Portal, answering Quest to get scores and increase Rank, and also can check previous month rank.
c) Customers can change their ID with Nick Name in the User Info Page Under Menu.
d) Customers can buy extra question with additional5questions via on-time purchase for 99 MMK including commercial tax. Customers can only do the on-time purchase Max 299 times per day.
e) Quest can be accumulated within 30 days, customers can answer the questions in any day during the valid period, no need to login and submit every day.
5. When is the Cut off time for each month?
- Every last day of the month 23:59:59, all the new operations after that time will be counted into next Month.
- The score will be counted from the first day of next month. ( The scores from previous month will be deducted )
6. Will the scores be added if subscribers unsubscribe the service withinamonth after usingafew days and subscribe again inafew days?
- The scores will be added for subscription withinamonth.
- For the Daily subscription or on-time purchase, after charging successful, system will generate one Content and Quest (5 questions), and user will automatically get 10 points as default. When user answer the questions will get more score, how to calculate scores are as follow.
Correct Question Number Points Remark
Correct0question0pints
Correct 1 question 1*2 =22 points/correct question
Correct2questions 2*2 =42 points/correct question
Correct3questions 3*2 =62 points/correct question
Correct4questions 4*3 = 123points/correct question (Bonus)
Correct5questions 5*4 = 20 4points/correct question (Bonus)
8. How to do the Ranking:
- For the Ranking Rules are as follow:
a) First system will Sort by highest to lowest score, the higher scores get higher Ranking;
b) If the players have the same score, who will Sort by the time the score was reached, the earlier the higher.
9. How the top 100 winners can join to TV program of MRTV Entertainment?
- After Cut time, we will do some activities as follow:
a) We will list the top 100 winners in the Facebook, and they can send message to our PIC;
b) Service Provider call center will call the top 100 users to check with them one by one to join the program studio or not;
c) After confirmed we will provide all the list to MRTV entertainment, they will continue to do the next step like what they do before.
10. How do I get reward?
- Mobifun will provide iPhone XS Max, OPPO F7, Power Bank, Top-up, etc.
- Players must subscribe to the Quest to Million Service during the Promotion Period.
- For monthly the detail prizes as follow:
Top2Power Bank
Top3Power Bank
Top4Mobile Top Up (10,000MMK)
Top5Mobile Top Up (10,000MMK)
Top6Mobile Top Up (10,000MMK)
Top7Mobile Top Up (5,000MMK)
Top 8 Mobile Top Up (5,000MMK)
Top9Mobile Top Up (3,000MMK)
Top 10 Mobile Top Up (3,000MMK)
- On6months if the player’s ranking should be in the monthly TOP10 list5times (within6months), will have the chance to join the lucky draw for iPhone XS Max.
11. How to unsubscribe “Quest to Million” service?
- To unsubscribe, type OFF and send to 8576 (or) visit to http://questtomio.com and find Menu and unregister.
12. How do I contact User Support?
- If you can’t find the answer to your question on our help site, you can always get in touch with call center. We will support you well.
Call –09404068881/ 09404068882/106
MPT ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - Quest To Million
ဤစာမျက်နှာသည် Quest To Million (Promotion²)တွင်ပါဝင်ကံစမ်းသည့်အခါ သင့်အနေဖြင့်လိုက်နာ ရမည့်စည်းကမ်းချက်များအား ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ Promotionအား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”၊ “ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို”၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏”)က ဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ရယူ နိုင်ပါသည်။ Promotion ကို MobiFun Co., Ltd က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Promotion တွင်ပါဝင်ကံစမ်းခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြားသော သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်းချက်များ” ဟု ခေါ်ဆိုရန်) ကိုဖတ်ရှုပြီး နားလည်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စည်းနှောင်မှုကိုခံယူရန် သဘောတူကြောင်း သဘောဆောင်ပါ သည်။
၁.၁ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Promotion ကို MobiFun Co., Ltd ကအပြည့်အဝ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Promotion တွင် MPT ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတိုင်းအတာသည်အောက်တွင်ထပ်မံရှင်းလင်းဖော်ပြမည့် ကျသင့်ငွေကောက်ခံခြင်း (Bill) နှင့် စာရင်းပေး သုံးစွဲခြင်း (Subscription) ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါသည်။
MobiFun Co.,Ltd သို့မဟုတ်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှအခြားနည်းဖြင့် တရားသဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ လွဲ၍ သက်ဆိုင်မှုရှိသည့်အတိုင်း ဤ Promotion နှင့်စပ်လျဉ်းသော ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ လိုဂိုများ၊ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊အသံ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂီတနှင့်အကြောင်းအရာအပါအဝင် ၎င်းတို့ချည်းသာ မဟုတ်သော (စုပေါင်း၍ “အကြောင်းအရာ”) MPT ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက် wစ်ခုခုနှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဉာဏပစ္စည်းအခွင့်အရေးများအားလုံးမှာ MPT နှင့် ၎င်း၏အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့်အခြားသောအကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများ၏ သီးသန့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်အတိအလင်း ဖော်ပြ ထားသည်မှလွဲ၍ Promotion ၏ မည်သည့်အရာကမျှ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများတစ်ခုခု တွင်ရှိသော သို့မဟုတ် ထိုအောက်တွင်ရှိသောအသုံးပြုခွင့်တစ်ခု သို့မဟုတ်အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန် တီးသည်ဟု မမှတ်ယူရ။ Promotion တွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သောအချက်အလက်များတစ်ခုခု သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှ ဆင့်ပွားရရှိလာသော လက်ရာများကို ရောင်းချခြင်း၊အသုံးပြု ခွင့်ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ဆင့်ပွားကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ပြသခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ သင့်လျော် သလို ပြင်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးခြင်းများကို သင့်အနေဖြင့် မပြုလုပ် ရန် သဘောတူပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များမှအတိအလင်း ခွင့်ပြုမထားသော မည်သည့်ရည်ရွယ် ချက်အတွက်မဆိုအကြောင်းအရာအားအသုံးပြုခြင်းကို တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။
၃.၁ Promotion ကာလသည် [၁၉ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈] မှ [၁၉ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉]အထိ (²Promotion ကာလ²) ဖြစ်ပါ သည်။
၃.၂ Promotion တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ရန် သင်အနေဖြင့် Quest To Million ဝန်ဆောင်မှုကို Promotion ကာလအတွင်း စာရင်းပေးသုံးစွဲရမည်။
Promotion တွင် MobiFun Co., Ltd အပါအဝင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှ ရရှိသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က ပံ့ပိုးပေး ထားသောအကြောင်းအရာ(²တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာ²)တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍အဆိုပါတတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ် သော ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုအတွက် MPTတွင် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုခုအား ရည် ညွှန်းချက်သည် MPT က ထောက်ခံမှု၊ ကမကထပြုမှု သို့မဟုတ်အကြံပြုမှု မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် ထိုသို့သွယ်ဝိုက်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
MobiFun Co., Ltd အနေဖြင့် Promotion ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဤတွင် ၎င်းတို့၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းရမည်။အကြုံပြုလိုသောခေါင်းစည်းများအားအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်။]
အသုံးပြုသူများအတွက် ပြည့်ဝသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့ထားပါသည်။အသုံးပြုမှုကို သုံးစွဲ သူမှ မပယ်ဖြတ်မချင်း ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုအလိုအလျှောက် တိုးမြင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုသည် MPT Operatorအသုံးပြုသူများအတွက် သာဖြစ်ပါသည်။ ပထမ ၇ရက်ကိုအခမဲ့ သုံးစွဲ နိုင်သည်။ ၇ရက်ကုန်ဆုံးပြီးနောက် Quest ၁ခုကို ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခအနေဖြင့် ၉၉ကျပ် ကျသင့်ပါပြီ။ ဝန်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းကို operator ၏ပေးပို့စာ သို့မဟုတ်အခြားဖုန်းငွေပေးချေမှုစနစ်မှ တစ်ဆင့် သင့်ဖုန်း operator network မှ လက်ခံရရှိပါမည်။
Quest to Million Service Provider မှ ပေးအပ်သော ဆုများကိုငွေသားဖြင့်လဲလှယ်၍ မရပါ။ ဝန်ဆောင်မှုများသည် operation ရည်ရွှယ်ချက်ပေါ်မူတည်၍အချိန်မရွေး ဆုမဲများတိုးပွားပေးနိုင်ရန်ရှိပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အတွက် 8576 သို့ ON (သို့မဟုတ်) QMT (သို့မဟုတ်) QMR ဟုပေးပို့နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် - http://questtomio.com လင့်ဒ်ထဲသို့ဝင်ရောက်၍ အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်း ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည် ကျွန်ပ်တို့ ၏စကားရပ်နှင့် လိုက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်သာရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
-Mobifun မှ ကံထူးရှင်များကို IphoneXs Max , OPPO F7,အားသွင်းဘထ္ကရီ, ငွေဖြည့်ကဒ်များနှင့်အစရှိသည်တို့ကို ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
-ကစားသူများသည် Quest To Million ဝန်ဆောင်မှုကို ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ရမည်။
ကစားသူ၏ ရမှတ်အဆင့်သည် လစဉ် Top 10 စာရင်းတွင် ၆လအတွင်း ၅ကြိမ်ပါဝင်ပါက iPhone XS Max ကို ကံထူးနိုင်ရန်အခွင့်အရေးရရှိပါမည်။
Winner ကို ၎င်းတို့၏ ရောက်ရှိအဆင့်များဖြင့် ရွေးချယ်ပါမည်။ရောက်ရှိသောအဆင့်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
၃.၁ ပထမစနစ်သည် ရမှတ်အမြင့်ဆုံးမှအနိမ့်ဆုံးသို့ သွားတော့အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအမှတ်များသူသည်အဆင့်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိ မည်ဖြစ်သည်။
၄.၁ Mobifun မှအမှတ်အများဆုံး ကံထူးရှင် Winner (၁၀)ဦး စာရင်းကိုကြေငြာပြီး ဆုများကို ပေးသွားပါမည်။
၄.၂ Mobifun မှအမှတ်အများဆုံး ကံထူးရှင် Winner (၁၀၀)ဦးကို ဆက်သွယ်၍ TV Show ကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုအတည်ပြုအကြောင်းကြားပေးသွားပါမည်။
၆.၁ MobiFun Co. Ltd သည် ပါဝင်ကံစမ်းသူတစ်ဦးအား ကြိုတင်၍အကြောင်းမကြားဘဲ သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုပေးရန်မလိုအပ်ဘဲ ပုံမှန် မဟုတ်သော သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခု ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း သံသယရှိပါက ထိုပါဝင်ကံစမ်းသူအား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
MPT Terms and Conditions – [Quest To Million]
This page explains the terms by which you agree to abide by when participating in the Quest To Million (“Promotion”). The Promotion can be accessed through services provided by Myanmar Posts and Telecommunications (“MPT”, “we”, “us”, “our”). The Promotion is operated by and provided to you by MobiFun Co., Ltd. By participating in the Promotion, you signify that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms and Conditions and any other applicable rules, policies and terms associated therewith (collectively, the “Terms”).
1.1 As mentioned above, the Promotion is fully operated by MobiFun Co., Ltd. The scope of MPT’s involvement with the Promotion is limited to billing and subscription functions only, which will be further explained below.
Except as otherwise rightfully operated by MobiFun Co.,Ltd or any other third party, as applicable, any MPT proprietary material related to the Promotion, including, without limitation, software, images, text, graphics, illustrations, logos, patents, trademarks, service marks, copyrights, photographs, audio, videos, music, and content (collectively, “Content”), and all intellectual property rights related thereto, are the exclusive property of MPT and its licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. Except as explicitly provided herein, nothing in the Terms shall be deemed to createalicense or right in or under any such intellectual property rights, and you agree not to sell, license, rent, modify, distribute, copy, reproduce, reverse engineer, transmit, publicly display, publicly perform, publish, adapt, edit or create derivative works from any materials or Content accessible on the Promotion. Use of the Content for any purpose not expressly permitted by the Terms is strictly prohibited.
3.1 The Promotion period is from [19 Dec 2018] to [19 Dec 2019] (“Promotion Period”).
3.2 In order to participate in the Promotion, you must subscribe to the Quest to Million Service during the Promotion Period.
The Promotion may aggregate content obtained or provided by third parties, including MobiFun Co., Ltd (“Third Party Content”). As such, MPT is not responsible for such Third Party Content or any linked websites associated with Third Party Content. Reference to any information, products or services of third parties does not constitute or imply endorsement, sponsorship or recommendation by MPT.
[MobiFun Co., Ltd to include their terms and conditions here for conducting the Promotion. Suggested headings are indicated below.]
Full access to the service will only be provided by subscription and subscription will be renewed automatically unless subscribers cancel. Service is only available for MPT users. First7days is free of charge, after that will charge only 99Ks per day. Service price will be deducted via operator invoices or other selected mobile payment methods you receive from your mobile operator network.
For all the Prize provide by Quest to Million Service Provider cannot be changed with Cash. Service Provider can increase the Prize at any time for the operation purpose.
In order to subscribe you can send ON, QMT, QMR to 8576 short code (or) you can visit to the link - http://questtomio.com and follow the instructions to subscription.
Mobile Top Up (10,000MMK)
Mobile Top Up (5,000MMK)
Mobile Top Up (3,000MMK)
Select the winner base on their ranking, the detail ranking rules are as follow:
3.1 First system will sort by highest to lowest score, the higher scores get higher ranking;
3.2 If the players have the same score, who will sort by the time the score was reached, the earlier the higher.
4.1 Mobifun will announce TOP 10 winners list and will give the prizes to winners.
4.2 Mobifun will contact to Top 100 winners and will confirm that they will join the TV show or not.
6.1 MobiFun has the discretion to disqualifyaparticipant whom it suspects to be undertaking or in connection with any unusual or suspicious activities, without prior notice or without needing to give any reasons for doing so.